UNdunankulu e-Australia uthi abasukume bazithathe
Sydney - UNdunankulu wase-Australia uJulia Gillard usecele abantu abangumsinsi wokuzimilela kuleliya lizwe ukuthi bavuke bazithathe benze ncono izimpilo zabo, njengoba bedume ngobuphofu, exwayisa nangokuthi imizamo kahulumeni ihamba kancane.
UGillard, ethula umbiko waminyaka yonke ngabantu bakuleliya lizwe, uthe kuzoba yinselelo enkulu kakhulu ukuzama ukwenza ncono izimpilo zabantu ngesikhathi esisodwa.
Ungcizelele ngokuthi luyadingeka ushintsho olunzulu kwezamasiko ukuze kuzoqedwa umkhuba wokusolana phakathi kukahulumeni wase-Australia kanye nabantu abangumsinsi wokuzimilela kuleliya lizwe. Uthe izimpilo zabantu zizothatha ingxathu lokushintsha uma abantu besukumela izimpilo zabo.
UGillard wethule le nkulumo emuva kweminyaka emithathu lowo othatha izintambo kuyena, uKevin Ruud, athatha ithuba lokuxolisa ebantwini bakuleliya lizwe ngokuhlukumezeka ababa ngaphansi kwabo kusukela kwafika abantu abamhlophe ngo-1788.